Mpianatra Malagasy tany Sina Tsy nahazo diplaoma, tsy afaka mitady asa
Mafy ny mahazo ireo mpianatra Malagasy nandrato fianarana tany Sina. Raha araka ny vaovao voaray mantsy dia tsy nomen’ireo oniversite lehibe nianaran’izy ireo tany an-toerana ny diplaomany noho ny tsy fahaloavan’ny fitondram-panjakana ny trosa 30 volana, vatsim-pianarana tokony omeny ireo oniversite lehibe any an-toerana.
Efa nanomboka tamin’ny taom-pianarana 2013-2014 no niainan’ireo mpianatra izany ary tsy mbola voavaha hatreto. Tsy navelan’ireo oniversite nianarany nanao “soutenance” ohatra ny sasany tamin’izy ireo tamin’ny taona 2015. Teo an-kilan’izay anefa dia iray volana monja ihany koa ny vatsim-pianarana mba noraisin’izy tamin’ny taona 2018 raha efa tsy zarizary ny teo aloha rehetra. Nijaly tanteraka ireo mpianatra Malagasy vokatr’izany satria tsy zarizary ny sakafo nohaniny no sady tsy afaka nitsabo tena tsy nanao boky ihany koa. Efa samy niezaka ny nivaro-pananana sy nanao izay mety avokoa moa raha ny fantatra ny Ray aman-dRenin’izy ireo teto an-tanindrazana saingy tsy zakan’ny teo am-pelatanànan’izy ireo izany. Olana goavana tena sedrain’ny mpianatra ankehitriny ny tsy fisian’ny diplaoma eo am-pelantanany hahafahany mitady asa. Miantso ny Fitondram-panjakana mba hijery akaiky ity tranga ity araka izany izy ireo. Tsiahivina moa fa nahatratra 273 ireo mpianatra Malagasy nandrato fianarana tany Sina teny am-piandohana lasa 239 mianadahy sisa izy ireo ankehitriny no nahavita hatramin’ny farany.